कला, ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
भरिलो उमेर बेचेर , महँगो सपना किन्ने दौडमै थिए जति जति । देखावटी समाजको चरीत्रमा , सकि नसकी औकातलाई घिसारी तेति तेति। मेरा व्यबहारहरु खोतल्दा देखिन्छ कि भनेर, जति जति। ज्वालामुखी जस्तैः समस्याहरु ममै लुकाएकै , तेति तेति। सम्भावनानै शन्यू भएको ठाउमा पनि बिचारले जोतेर , अवसर उमार्न नखोजेको हैन। चम्चेनै भएर किन नहोस् , समृद्धिको अङालोमा अट्छु कि भनेर। जिन्दगीलाई तेतै नगुडाएको पनि हैन। तर समयको सुइले धकेली रहदाफुर्सदमा
कला, ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, राष्ट्रिय समाचार, साहित्य बाटिका No Comments »
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: August 12, 2021
साउन २७, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पुरातात्विक महत्वको घर भत्काउनुपर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलगायतका निकायका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले पुरातात्विक महत्वको घर भत्काउने काम रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्तफुर्सदमा
परदेशी खबर/ १८, अप्रिल। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन कुवेतमा रहेका नेपालीहरुलाई सतर्कता अपाउन अनुरोध गरिएको छ। विश्वमा जस्तै रोजगारीको नेपाली कामदारको बाहुल्य रहेको देश कुवेतमा पनि दिनानुदिन संक्रमण फैलिए सँगै कुवेतमा रहेका नेपाली समुदाय भित्र पनि फैलदै गएको कारण उच्च सतर्कता अपनाउदै सुरक्षित रहन सुचित गरिएको हो। साथै कुवेत सरकारले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ विदेशीक शाखा कुवेत तथाफुर्सदमा
परदेशी खबर / २८ मार्च , । मार्च २७ शनिबारका दिन नेपाली राजदूतावास मस्कटले ”Nepal- Oman Literature & Nature: Posthumous Recognition to Late Mr. Mohamed Al Harthi, The Eternal Traveller” विषयमा साहित्य र पर्यटन सम्बन्धी एक वेभिनार आयोजना गरिएको छ । काठमाडौं सेरोफेरोका महत्त्वपूर्ण र मनमोहक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा जानकारी दिने अभिप्रायले आफ्नो नेपाल भ्रमणको अनुभव समेटेर अरबी भाषामा नियात्रा लेख्‍नुभएका ओमानी नागरिक स्व. मोहम्मद अल हार्थीज्यूले नेपाली पर्यटन रफुर्सदमा
ताजा खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: March 17, 2021
कविता “म मर्दा मलामी कति?” – युवक राई ( ठिम्बर )
यदि यादहरुको निश्चित आयु भैदिए , अनि मनहरुको मन भित्रै मृत्यु भैदिए l सायद , सात समुन्द्र त के,सात ग्रह पर जादाँनि, सताउने नछोड्ने अतितलाई बिर्सन सक्थे। चिन्ताहरुको काधमा जिन्दगीलाई चिता तीर लादै गर्दा जति जति। खै किन एकप्रकारको कौतुहलता छ , मनमा , ” म मर्दा मला ?” भोगाइलाई कलम बनाएर , समयरुपी दिनरातको पानामा आफ्नै आत्मकथा लेख्न सक्छु। म भित्रको, म हरुले , मलाई , मृत्यु संग आत्मसमर्पणफुर्सदमा
परिवर्तित जीवनशैली र तनावका कारण अनिद्रा आमसमस्या बनिरहेको छ । एक किसिमको विकार हो । अनिद्राले दैनिक जीवन नै प्रभावित बनाउँछ । यसकै कारण थकान, तनाव तथा उदासीनता उब्जिन सक्छ । तर, तपाईं–हामीले खाने खानाबाट यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा निद्रा नलाग्ने समस्या समाप्त पार्न यी पाँच खाना उपयुक्त हुन सक्छन् । १. चेरी चेरी एकदम स्वादिष्ट फल हो । यसमा राम्रो निद्रा पार्ने गुण हुन्छ ।फुर्सदमा
Model Watch, Uncategorized, ताजा खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
निलो गगन चुम्ने अटल उदेश्यहरुलाई सोच्दै नसोचेको तुवाँलोले छपक्कै छोपिदियो अचानक जीवनमा — खुसीको रङ्गहरु भर्यो रङ्गीचङ्गी फुलहरु छर्यो तर……. सोच्दै नसोचेको आँधिले बगाएर लग्यो रङ्गहरु पर ~ पर सम्म ओ प्रिय मान्छे, अथाह माया गर्थ्यो हगि! हाम्रो प्रेम देखेर डाहा गर्थ्यो दुनियाँले त्यसैले होला सायद डाहा गर्यो नियतीले पनि उदाङ्गियो मेरो जीवन र लुटियो खुसीहरु। संगै जिउने संगै मर्ने ती कसमहरु म बिना बाँच्नै नसक्ने ती बाचाहरु सम्झन्छु चर्याउछफुर्सदमा
lama vai, लामा भाई Model Watch, Uncategorized, कला, ताजा खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
Post by: Lama Vai प्रकाशीत मिति: August 8, 2020
समय र परिस्थितीको एउटा नयाँ संघारमा छु यहाँ । जहाँबाट बितेको जिन्दगीको समिक्षा गर्दै। आउने ,जिन्दगीको शुरु गर्नु छ शुरु बाटै यहाँ । संघर्ष र मेहनत भित्र सुनौलो भबिस्य पाउने आशमा, बिछोड र एक्लोपनमा पनि मुस्कुराई दिन्छु यहाँ । अलिकति उज्यालोमा धेरै अध्यारो मिसाउदा मधुरो बने जस्तैःअलिकति सुखमा धेरै दुख मिसाउदा म बन्छु यहाँ । दुखको उतारचढावमा शिथिल अझै भएको छैन म। नत सुखकै बहारहरुमा मातिएको छैन म यहाँ ।फुर्सदमा
Model Watch, Uncategorized, कला, ताजा खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
Post by: Lama Vai प्रकाशीत मिति: July 26, 2020
जन्मेदेखि हुर्के सम्म गर्‍यो तिमीले स्याहार । कति रोयो कति करायो तर मानिनौ तिमीले हार ।। आमा समर्पण , त्याग , स्वार्थविनाको अर्को उपनाम। गर्वले भन्नू आमा छोरा युरोपमा छ गर्दैन बदनाम । जति कमाउछु सुख मनले तिमीमा अर्पण गर्न पाउ। भौतिक ऋण संगै तिम्रो गुणको ऋण तिरी सक्न पाउ। धेरै सपना देखाएर गएको छोरा बाकसमा फर्क्यो भने। आमा ! भाई छनी तिम्रो सहारा भनी चित्त बुझाउनु। श्रवण कुमार जस्तैःफुर्सदमा
केही थान छुटेका यादहरु – रोशनी गुरुङ
आजभोलि केही थान छुटेका यादहरुले सताई रहन्छ ऊ बेला मेरा बाल्यकालका केही थान खुसी बाबाले जोत्दै गरेको खेतको आलीमा छुटेका छन् मेरा किशोर अवस्थाका केही थान उमंग मैले पढ्ने विद्यालय र मैले खेल्ने गरेको चौतारीतिर छुटेका छन् मेरा केही अव्यक्त मुस्कानहरु मेरा बालसाखाहरुसँग उतै छुटेका छन् जीवनमा बाल्यकाल छुटनु भनेको साथ छुटनु जस्तो होइन रहेछ अनि किशोर अवस्था छुटनु भनेको खाँदै गरेको भाग छोड्नु जस्तो पनि होइन रहेछ आजभोलिफुर्सदमा